Faah faahin banaanbax rabshado wata oo ka dhacay Qardho (Sawiro ) – Radio Daljir
Faah faahin banaanbax rabshado wata oo ka dhacay Qardho (Sawiro )
Nofeembar 23, 2012 10:35 b 0
Qardho Nov 23, Faah faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa Banaanbax ballaaran oo maanta ka dhacay magaaladda Qardho ee xarunta gobolka Karkaar kadib markii halkaasi uu gaarey M/weynaha Dawlada Puntland Dr Cabdiraxmaan Sh Maxamed Faroole & wafti uu hogaaminayo.
Waftiga M/weynaha ayaa intii uusan gudaha u galin gudaha magaaladda Qardho ee xarunta gobolka Karkaar, ayaa waxaa duleedka magaalada uga hortegey gaadiid ay saaraayeen dad soo dhoweyn u samaynayey M/weynaha iyo Waftigiisa.
Intii lagu maqnaa soo dhoweynta Madaxweynaha ayaa waxaa gudaha magaaladda markeliya ka bilowday Banaanbax aad u balaaran kaasoo ay abaabuleen dad caraysan oo u badnaa dhalinyaro kuwaasoo Wadada laamiga ah dhigay Dhagax & Taayiro la gubey.
Dhalinta Banaanbaxa samaynaysey ayaa bilaabay tuurista Dhagxan ay ku garaaceen Gaadiid ay leeyihiin ciidanka Amaanku iyagoo si xoog ah ku jiiray Wadooyin ay xireen ciidanka amaanku.
Ciidamada Amaanka ayaa rasaas ooda kaga qaaday Banaanbaxayaasha iyadoo rasaastu haleeshay dad shacab ah, 4 qof oo shacab ah ayay haleeshay rasaastu iyadoo dhaawacyo isugu jira kuwo liita & kuwo sahlan ay soo gaareen dadka shacabka ah ee rasaastu ku dhacday.
Shacabka Banaanbaxa Sameeyey ayaa dhankooda Dhagxaan ku garaacay gaadiidka ay wateen ciidamada amaanku iyadoo ay jajabeen qaar kamid ah gaadiidka ciidanka Muraayadahoodda, Waxaa sidoo kale dhaawac fudud soo gaarey 2 askari oo kamid ah ciidamada Amaanka Kadib markii dhagax Madaxa kaga dhacay.
Ugu danbayn ciidamada amaanka ayaa ku guulaystey xasilinta magaaladda iyagoo kala cayriyey Banaanbaxayaasha kadib waxaa magaalada gaarey M/weynaha iyo waftiga uu hogaaminayey iyagoo la dejiyey meel loo siidiyaariyey inay ku nastaan.
Magaalada Qardho ayaa caawa ku gabal dhacsatay deganaansho iyadoo ay ciidamada amaankuna wadaan hawlgalo lagu xaqiijinayo amaanka guud ee degmadda.
Qardho waxay kamid tahay meelaha ugu xoogan ee laga diidan yahay in Xukuumadda Madaxweyne Faroole shaqayso mudo shan sano ah iyadoo siyaasiyiin reer Puntland ahi ku doodayaan in wakhtiga Xukuumaddu ku eg yahay mudo 4 sano ah xiligana ay ka dhiman tahay mudo ka yar laba bilood.
Barnaamijka Maanhadal, Nov 23, Cabdirisaaq Cali Cabdi (Silver)_Daljir Galkacyo